Ciyaaraha mootooyinka ugu fiican PC | War gadget
Ciyaaraha fiidiyowga gawaarida ayaa shaki la'aan ah kuwa ugu caansan kuwa ugu xamaasadda badan xawaaraha iyo adrenaline, kuwa ugu badan ee la ciyaaro had iyo jeer waa cayaaro fiidiyoow ah oo xaalad baabuur leh, laakiin ka warran haddii waxa aan dooneyno ay tahay inaan ka dejino dhammaan xiisaddayada xagga dambe ee mootada? Waxaan haynaa fursado kala duwan oo kala duwan markii aan dooranayno ciyaarta aan ku ciyaareyno, laakiin si cad uga liidata liistada aan ka helno marka la eego tartamada gawaarida ee fiidiyoowga ah.
Waxaan ku kala duwanahay tusaalooyinka yar ee jira, maaddaama aan ka helno jilaayaasha tartanka mootooyinka adduunka, illaa motocross, halkaas oo boodboodyo waaweyn iyo barafka dhoobada ka taagan. Xaaladdan oo kale, duruufaha loo doortay inuu ciyaaro waa aaladda kontoroolka fog, maxaa yeelay isteerinka ma noqon doono midka ugu habboon wadista mootada, wayna adag tahay in la helo nooc mootada wata aallad loo adeegsado isticmaalka guriga. Qodobkaan waxaan ku faahfaahin doonnaa kuwa ugu fiican ciyaaraha mootada ee kombuyuutarka.
1.1 Habka khadka tooska ah
2.1 Habka khadka tooska ah
3 Raad 4
3.1 Habka khadka tooska ah
4.1 Habka khadka tooska ah
Kani waa jilitaanka mootada ee ku saleysan MotoGP World Championship, oo leh nuqullo isku mid ah oo ka mid ah fuulitaannada aan ku aragno horyaalnimada dhabta ah iyo isla wadayaasha, maadaama ay tahay taxane sannadle ah waa wax isdaba-joog ah oo u dhexeeya noocyada, sidaa darteed waxaan doorannaa nooca aan dooro gameplay noqon doonaa mid aad u la mid ah. Dabcan, waxay muujineysaa in istuudiyaha uu dhageysto taageerayaashiisa, sidaas darteed waxaan arki doonaa khaladaad badan oo la saxay oo lagu arkay qaybo hore, marka lagu daro muuqaal muuqaal cusub ah.
In kasta oo ay cadahay, hantida ugu weyn ee ciyaartan fiidiyowga ah ayaa ah in gabi ahaanba muuqaalkeeda muuqaalku yahay mid rasmi ah, iyada oo ay ugu wacan tahay ruqsadda Koobka Adduunka, waxaan haysan doonnaa kooxaha dhabta ah, duuliyeyaasha, mootooyinka iyo wareegyada. Tani ma aha kaliya adduunka fasalka koowaad, waxaan sidoo kale haysannaa wax walba oo aan ku arki karno Moto2, Moto3 iyo 500cc laba-stroke iyo MotoGP taariikhi ah afar-cirib ama qaabka cusub ee MotoE.
Waxaan sidoo kale muujineynaa qaab xirfadeed dhameystiran oo noo ogolaanaya inaan u saxeexno koox dhab ah ama aan abuurno kuweena. Halkii aan ka noqon lahayn midabyo kala duwan iyada oo aan la helin dhiirigelin, marka lagu daro tartamida, waa inaan maareynaa dhinacyo kala duwan oo ku saabsan xirfadeena xirfadeed sida duuliyeyaasha, oo ay kujiraan kafaala qaadayaasha, saxiixa shaqaalaha ama horumarinta buurteena
Habka khadka tooska ah
Waxaan u haynaa qaab khadka tooska ah oo loogu talagalay laba iyo toban ciyaartoy oo isku dhafan oo lagu raaxaysan karo qaabab kala duwan, sida muran ku saabsan tartamada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ama xitaa doorta inay ku tartamaan xilli ciyaareedka cusub ee eSport. Dhammaan tan oo leh adeegyo gaar ah oo damaanad qaadaya dabeecadda ugu wanaagsan ee lagu ciyaaro oo aan dib u dhac lahayn. Ciyaartan fiidiyowga waxaa si tartiib tartiib ah u cusbooneysiinaya horumariyeyaasheeda sidaa darteed waa lagu hagaajiyay mid kasta oo ka mid ah balastarrada.
Ciyaartii 'Motocross' ee aakhirkii aragtay iftiinka in kasta oo uu faafay, haddana ciyaarta ayaa haysa dhammaan wanaagii kii ka horreeyay laakiin si muuqata ayay u hagaajisay qaybta garaafka. Waa ciyaartii ugu horreysay ee aan ku ciyaari karno sida Jorge Prado, oo ah duuliye Galician ah oo Spain u matalaya ciyaarta. Dhawaaqa Dareenka ayaa hal talaabo u sii socda oo wuxuu dib u soo celiyaa buuqa mootooyinka si aan hore loo arag sida codadka iyo dhiirigelinta dadweynaha ee duuliyeyaasha.
Sidee bay noqon kartaa haddii kale, ciyaartan waxaa ka mid ah 19-ka wareeg ee ka kooban xilli ciyaareedkii 2020 ka dib markii lagu daray Lommel iyo Xanadu oo si faahfaahsan u hadlaya. Waxaan gacanta ku haynaa 68 wadayaasha qaybaha kala duwan, laga bilaabo 250cc ilaa 450cc iyo sidoo kale in ka badan 10.000 oo shey oo rasmi ah si shaqsi ahaaneed looga dhigo dhammaan bilicsanaanta iyo waxqabadka mootadeena.
Ma ahan wax aad uga dambeeya marka la eego qaababka ciyaarta oo ay ku jiraan kuwa caadiga ah Xirfadda, Grand Prix, Waqtiga Tijaabada iyo Horyaalnimada. Habka loo socdo wadada hadafkeenu wuxuu noqon doonaa inaan ka bilowno tan ugu hooseysa duuliyaheena gaarka ah kaas oo aan u habeyn doono sida aan u jecelahay waxaanan ka heli doonaa khibrad iyo kafaala qaadayaal si aan kor ugu qaadno kor.
Habka ciyaartoy badan ma seegi karin, si weyn ayuu u hagaajinayaa qaybtan oo ay ku jiraan ugu dambeyn server u heellan Tani waxay u oggolaaneysaa ciyaaro dheecaan badan oo aan lahayn dib-u-cabsi laga qabo oo burburinaysa tartanka. Waxaan sidoo kale leenahay Habka Agaasinka Jinsiyada si aan u abuurno tartamadeenna oo aan si toos ah ugu baahinno adoo u xilsaaraya kamaradaha.
Saga ee abuurayaasha 'MotoGP' oo bixiya aragti ka duwan waxa loo yaqaan 'mootada', wuxuu u jiidayaa aragti aad u daran. Aynu nidhaahno taasi waa murugada weyn ee mootooyinka, oo lagu sharxayo jilitaanka iyadoo la adeegsanayo ku dhowaad mootooyinka waddooyinka aan qiyaasi karno.
Qeybtiisii ​​afaraad waxaan ka helaynaa a muuqaal muuqaal ah oo dib loo habeeyay oo u yimaada buuxinta jiilka soo socda ee PS5 iyo taxanaha X iyo sidoo kale kumbuyuutarrada ugu awoodda badan. Markii ugu horreysay waxaan markhaati ka noqon doonnaa cimilada firfircoon ee la filayo, taas oo noo oggolaan doonta inaan ku bilowno ciyaar cirka daruuro leh oo aan ku dhammaanno roobab culus. Wareegga habeenka iyo maalinta sidoo kale waa lagu daray sidaa darteed waxaan bilaabi karnaa tartamada galabnimada oo aan ku dhamaysan karnaa fiidkii.
Qaababka ciyaarta wax badan kuma kala duwana kii ka horreeyay waana tan aan ku bilaabayno qaab xirfadeed meesha aan xulashadeenna koowaad ka dhiganno waa horyaal gobol oo aan dooneyno inaan ku bilowno xirfadle ahaan. Waxay kuxirantahay waxa aan doorano, waxaan ku tartami doonnaa hal wareeg ama wareegyo kale oo aan ku mari doonno tijaabooyin kala duwan si aan kor ugu qaadno. Cayaartu waxay dalbaneysaa marka la eego ciyaarta oo waxay bixisaa wax badan oo macquul ah laakiin sidoo kale waa dhibaato aad u sarreysa haddii aan dooneyno inaan ku xakameyno buurta xawaare buuxa.
Waxaan haynaa garaash iyo lacag aan kasban karno inta aan ciyaarta ku guda jirno, ujeedkeenu wuxuu noqon doonaa in garaashkaan lagu buuxiyo mootooyin dhammaan barakacayaasha ah. oo iyaga lagu hagaajiyo ugu badnaan. Marka aan ku horayno ciyaarta waxaan magac u sameyn doonnaa taasna waxay na siin doontaa fursad aan ugu boodno horyaallada adduunka iyo kuwa adduunka loo yaqaan 'SuperBikes'.
Buug-gacmeedka mootada ayaa gaaraya tirada 175 Moors rasmi ah oo ka socda 22 shirkado kala duwan, laga soo bilaabo 1966 ilaa maanta. Dhanka kale waxaan heleynaa kudhisnaan 30 wareeg oo dhab ah, dib loogu daalay daal. Qaybta garaafka ayaa si taxaddar leh loo daryeelay, iyadoo lagu xisaabtamayo 3d iskaanka leysarka ee loogu tala galay rakibidda iyo duuliyaasha. Animations ka wadayaasha iyo mootooyinka socda waa macquul macquul ah, taasoo ka dhigeysa mid cad waqtiga iyo daryeelka loo hibeeyay qeybta muuqaalka.
Ciyaartu waxay leedahay qaab fudud oo fudud oo khadka tooska ah leh qaabab ciyaar oo yar, laakiin waxay noqon doonaan tijaabo adag oo tijaabo ah oo lagu muujinayo cida darawalnimada ugu fiican ee shabaqa ku tartamaysa ilaa 12 ciyaartoy oo caalami ah. Tiro ka badan oo habab ah ayaa la la'yahay, iyo sidoo kale qaab kala-qeybsanaan-maxalli ah oo qaab multiplayer ah.
Waxa mudan in la qadariyo ayaa ah inaan heysano adeegeyaal u heellan, sidaa darteed dareeraha iyo tayada cayaaraha ayaa ugu fiicnaan doona. Guud ahaan cayaartooydu way fiican tahay oo si sax ah ayey u shaqaysaa, in kasta oo ay noo hartay dhadhan qadhaadh haddii aan tixgelinno baaxadda cinwaanka iyo daryeelka la siiyay qaybaha intiisa kale.
Ciyaarta udub dhexaadka ah ee loo yaqaan 'motocross game' oo ay maalgeliso nooca loo yaqaan 'Monster brand of drinks' oo aan ka helno wadayaal, wareegyo iyo kooxo rasmi ah oo ka tirsan horyaalnimada Mareykanka. Waxyaabaha ka dhex muuqda wax kasta oo kale waa heer sare oo habeyn ah oo aan ka helno cinwaankan. Waxaan kala dooran karnaa naqshadaha kala duwan, noocyada, midabada koofiyadaha, muraayadaha, kabaha, ilaaliyaha, istiikarka ... Marka cawsduur taxane ah la dhammeeyo, waxaan ka shaqeyn doonnaa yoolkeenna ah inaan gaarno meesha ugu sarreysa.
Waxaan wajaheynaa ciyaar aan annaga oo aan ahayn qabyaalad saafiya ah, aysan aheyn arcade dhameystiran, sidaa darteed raacitaanka casharradu si taxaddar leh ayey wax badan nooga caawin doontaa markaan wadno. Ma jiro xaalad dhib ah, sidaa darteed qallooca dhibku wuxuu noqon doonaa mid horumarsan, bilowga ma sahlana inaad ku guuleysato tartan, laakiin arrimuhu way ka sii xumaan doonaan markaan horay u socono. Ma sahlanaan doonto in baaskiilku toosnaado sidoo kale, sidaa darteed waa wax aad noo caadi ah inaan dhulka ku dhufanno xisaab yar.
Waxaan leenahay qaab loo yaqaan 'Complex', oo aan ka helno muuqaallo ku saleysan jasiiradaha Maine, oo aan ku raaxeysan doonno kiilomitir wadista bilaash ah si aan u tijaabino xirfadaheena. Waxaan sidoo kale leenahay xoogaa wareegyo SuperCross ah iyo mid ka mid ah MotoCross halkaas oo aad ugala qayb geli karto asxaabtaada.
Qaybta garaafku waxay kuxirantahay PC-ga aan haysanno, laakiin haddii aan haysanno mashiin wanaagsan, waxaan ku raaxeysan doonnaa tartamada dareeraha oo leh sawirro aad ufiican, qaabab dhismeedka iyo waqtiyada rarka ayaa la hagaajiyay. Xusuus gaar ah fiisigiska mootooyinka iyo gaar ahaan wadada. Wareegyada qaarkood waxay leeyihiin dusha sare oo dhoobo ah, halkaas oo baaskiiladdeenna ay uga tagi doonaan waddooyinkooda oo ay ku taraaraxayaan dhoobada. Sawir gacmeedyada waxaa weheliya dhawaqa wanaagsan, oo muujinaya dhagaxa iyo dhawaqa dhaga la 'ee tuubooyinka qiiqa.
Tani waa halka aan ka heli karno warar yar, maaddaama qaabkan ciyaartoy badani uusan wax badan iska beddelin marka loo barbar dhigo kii ka horreeyay, laakiin waxaan ku raaxeysan karnaa tartamada ilaa 22 ciyaartoy ah. Ciyaartu waxay leedahay adeegeyaal gaar ah oo ka fogaan doona silica lama filaanka ah ama googoynta inta isku xirkeenu u oggolaanayo. Waxaan ku abaabuli karnaa horyaalada bulshada dhexdeeda habka 'Race Director', halkaasoo aan ka noqon doono qabanqaabiyeyaasha waxaan awoodi doonnaa inaan baahino horyaal tayo sare leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Guriga » Videogames » Ciyaaraha mootooyinka ugufiican PC
Jabra Elite 75t, falanqaynta shey aad u wareegsan